यी हुन् नेपाली फिल्मका महँगा निर्देशकहरु
एजेन्सी–केही वर्षयता नेपाली फिल्महरुमा देखिएको सुधारले नेपाली सिने जगतलाई एउटा विशेष नजरले हेर्ने बानी पर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक नेपाली फिल्महरुका निर्देशकहरुले पनि आशा जगाएका छन् । निर्देशकहरुले पनि फिल्म निर्देशन गरे बापत ठुलै रकम लिने गरेका छन् आउनुहोस् हेरौ नेपाली फिल्म जगतका ३ महँगा निर्देशकहरु
६३ वर्षकी रेखाका वास्तविक श्रीमान र सिन्दुरबारे यस्तो खुलासा
यी हुन् बलिउडका चर्चीत भिलेनका चर्चीत छोरीहरु
अभिषेक बच्चनलाई प्रश्न : अझै पनि किन माता–पितासँगै नै रहन्छौ ?
यी हुन बलिउड नायक नायिकाका डरलाग्दा स्टन्ट दिने डुप्लिकेटहरु !
‘रेखा आमा’ भन्दै ऐश्वर्यालाई रेखाले लेखिन् यस्तो भावुक पत्र
एजेन्सी । बलिउडमा सामाजिक सञ्जालका विषयलाई लिएर निकै ठूला–ठूला मुद्दा नै बन्ने गर्छन् जसबाट सायदै कम अभिनेता तथा अभिनेत्री अछुतो होलान् ।
फिल्महरु हिरोहरुबिना अपुरो हुन्छन् । तर, हिरोको हिरोइजम प्रस्तुत गर्न पनि भिलेनको उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । उनीहरुको क्रुरता, डरलाग्दोपनका कारण फ्यानहरुले उनीहरुलाई सम्झने गर्छन् तर उनीहरुलाई मन भने पराउँदैनन् ।
वर्षाले हात झिकेपछि पूर्वमिस नेपाल निकिताले समाइन्
काठमाडौं । चलचित्र ‘रानीमहल’ मा मुख्य अभिनेत्रीका लागि मिस नेपाल २०१७ की निकिता चण्डकले समझौता गरेकी छन् । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले हात झिकेको फिल्ममा चण्डक अनुबन्धित भएकी हुन् ।
चलचित्र ‘बेबी आई लभ यू’ को नयाँ पोष्टर सार्वजनिक
काठमाडौं । लिची इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि.को ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘बेबी आई लभ यू’ को नयाँ (दोस्रो) पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्र ‘बेबी आई लभ यू’ जेठ १८ गतेबाट देशभर प्रर्दशनमा आउनेछ ।